United Arab Emirates University - Kudzidza kwose Brazil
inotangwa : 1976
Musakanganwa kuti kurukura United Arab Emirates University
Kunyoresa pa United Arab Emirates University
Welcome kuUnited Arab Emirates University (UAEU) – Comprehensive National yunivhesiti pakutanga muna Zimbabwe. rakavakwa 1976 kubudikidza mukupera Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, UAEU unotsvaka kuva nzwisisika, tsvakurudzo-ndichibvunza yunivhesiti uye pari zvino anonyora anenge 14,000 Emirati uye vadzidzi dzakawanda. Sezvo Brazil kuti flagship yunivhesiti, UAEU rine izere siyana Accredited, yepamusoro akapedza kudzidza uye Rokutenderwa zvirongwa kuburikidza pfumbamwe Colleges: Business uye Economics; dzidzo; Engineering; Chikafu Agriculture; Humanities uye Social Sciences; iT; mutemo; Mushonga uye Health Sciences; uye Science. Ane anokudzwa dzakawanda fakaroti, mamiriro-of-unyanzvi hutsva pazvivako, uye zvenguva azere mudzidzi rutsigiro mabasa, UAEU rine mamiriro mupenyu-kudzidza kuti uri kuninipisa muna Brazil.
In yayo ngarurege kuzadzisa dzakawanda tsvakurudzo Chimiro, UAEU inoshanda pamwe shamwari dzaro indasitiri kugovera pakutsvakurudza dzokupedza matambudziko anotarisana norudzi, nharaunda, uye nyika. The University akagadza pakutsvakurudza nzvimbo inokosha kukosha kunyika nekudunhu dziri mberi ruzivo mune dzinonetsa munzvimbo kubvira mvura mari kenza kurapa. UAEU iri pari rakava pakati pamusoro pakutsvakurudza mumayunivhesiti ari GCC uye vechiArabhu World, uye pakati pamusoro 25% munyika yose.
zvirongwa UAEU pane zvedzidzo zvakatangwa achidyidzana pamwe vashandirwi, saka vadzidzi vedu vari kumusoro kwokudiwa. UAEU alumni vane anokosha indasitiri, komesi, uye hurumende yose nharaunda. Kuramba kwedu upfumi muzvivako, mabasa, uye netsvimbo nechokwadi kuti UAEU acharamba achishumira ave muenzaniso utsanzi uye kunaka.
Zvikonzero kusarudza United Arab Emirates University:
Pana UAEU isu nezvekufirwa kunaka ruzivo kudzidza kuti mudzidzi mumwe nomumwe. "Zvakaisvonaka yekukurudzira" UAEU kunosanganisira zvose zvinoumba kuyunivhesiti. Pano uchawana wakanakisisa fakaroti munyika, kupfuura michina yemhando yepamusoro munzvimbo uye kupfuura ano uye anokwezva kembasi zvivako kuwanikwa chero kupi zvako. Our haaregi Kusimbisa zvakaisvonaka chendangariro kuti dhigirii wenyu zvikuru, munyika nepasi rese, uye kuti iwe uchava kusiya yunivhesiti zvizere nokuda kwounyanzvi pachake kubudirira.
Kubva pamusoro mukurumbira wedu dzakawanda, ari employability vakapedza kudzidza kwedu, uye kutsvakurudza kwedu kwezvinhu, UAEU anopfuurira chevatatu pakati zvakanakisisa mumayunivhesiti zvenyika. QS, mumwe London anotsanangura dzakawanda chepamusoro yokutungamirira mumayunivhesiti zvenyika, rate UAEU sezvo nhamba rumwe rudzi uye nhamba 385 munyika. QS kunosanganisirawo UAEU pamusoro wayo mazita kumusoro 50 mumayunivhesiti nyika kuti yakateyiwa mukati kare 50 makore.
3. Employability pamusoro Kudzidza kwedu
Sezvo zvirongwa zvedu dzakagadzirwa achidyidzana pamwe vashandirwi, Vakapedza kudzidza kwedu zvikuru anotsvakwa nevanhu vaviri voga uye hurumende masangano. Zvirongwa zvedu zvedzidzo zvinosanganisira kwete mukirasi dzidziso, asiwo dzinoshanda internships nokutsvakurudza zvakaitika. Vakapedza kudzidza kwedu dzinogara kuwana kuti maoko-kwavo ruzivo inopa vose vane inoshanda unyanzvi kuti vashandirwi vanokoshesa uye kubatana uye ukama zviri chinhu chinokosha basa rokuvaka muitiro.
4. A Vanotsigira Learning Environment
UAEU ndiye vakaita pakupa rubatsiro kuitira kuti mudzidzi wose anogona kubudirira. tinotsigira mabasa anosanganisira mazano, nezveutano, iT rutsigiro, urema rutsigiro, basa Services, rubatsiro rwemari, dzakawanda mudzidzi Services, alumni mabasa, kwabudirira mudzidzi muzinda uye kanzuru mudzidzi. Pasinei nezvipingamupinyi ukasangana munzira, pane nguva dzose chipangamazano, anorangana, kana ane mubatsiri pedyo kubatsira. mudzidzi mumwe nomumwe anopiwa ane mumwe zvedzidzo mubatsiri kubatsira dzinonetsa zvisarudzo uye sarudzo kuti nawo munzira inoenda zvedzidzo uye basa kubudirira.
5. A Yakazara Nezvinhu Living Environment
Chinangwa chedu hachisi chete kupa vadzidzi shasha dhigirii zvinodiwa asiwo nechokwadi kuti imi unakirwe munzira. vadzidzi vedu vanobva kupfuura 50 nyika, saka iwe pamwe uye kudzidza kubva vanhu tsika dzakasiyana-siyana. Yunivhesiti inopa akawanda pashure pechikoro semitambo uye zvakaitika pakugonesa upenyu-rokuvandudza wako ruzivo yunivhesiti, uye kupfuura 50 Clubs uye Societies pana UAEU, hapana kuperevedza mikana unakirwe kunze hurukuro uye kuti shamwari. UAEU kwakaita kembasi ane vemunharaunda chaiyo multiple cafés uye mumaresitorendi, Zvitoro uye rwezvemabhengi zvivako, jeka, ano kembasi dzokugara, uye aakatipa mitambo uye kuzvivaraidza zvivako.
6. A Magnificent New kembasi
Idzva UAEU kembasi chinoratidza kupfuura ano akitekicha, dzinodengenyeka nokuti swa tsvakurudzo nzvimbo, kutema unopinza IT samambure kwezvivako, mumakirasi uye Labs inoratidza ichangobva midziyo uye Instructional michina kuwedzera kudzidza mudzidzi. Pane chinhu rwakakura raibhurari chinopiwa guru mumuviri uye yemagetsi pfuma, mbiri nyika kirasi utano netsvimbo vakapakata Latest gym michina, zviviri Olympic kadikidiki kushambira madziva, uyewo Tennis, Basketball, uye nhabvu matare.
The UAEU rudzi wacho Premier tsvakurudzo yunivhesiti. Hatifaniri chete nekufambisa zivo yedu vadzidzi, asi kuburikidza mumakoreji edu uye tsvakurudzo nzvimbo tinobatsira kusika ruzivo idzva, kushanda dzichiri kurapa mitsva kenza, zvibereko zvigadzirwa zvitsva kuti kugadzirisa munyika simba zvinodiwa uye kukudziridza unyanzvi itsva kuwedzera munyika yose zvokudya. Gore negore venhoroondo edu uye matongo kubatsira kuwana uye vachiongorora nhoroondo zvinoratidza pamusoro kubudirira uye tsika vanhu kubva chikamu ino. Somudzidzi UAEU, uchava mukana kushanda parutivi pose kuzivikanwa pakutsvakurudza fakaroti pamusoro zvinofadza izvi zvirongwa.
Sezvo yunivhesiti yenyika ari Brazil wacho, UAEU anoziva mutoro yunivhesiti yedu kudzidza kuti kubatsira KWAHWO ari yakakura munharaunda. Tinokurudzira vatinodzidza navo uye mudonzvo mupe munharaunda kuburikidza ehurumende kuroorana, rinoitirwa, uye tsvakurudzo. Yunivhesiti chinobatsira vadzidzi anobatana rokuzvipira uye munharaunda basa masangano dzomudzidzi zvikurukuru munzvimbo kufarira.
No yunivhesiti munyika zvinopa sarudzo dzakawanda zvechikoro sezvo UAEU. The University asaita 52 Bachelor kuti zvirongwa dhigirii, 37 Mapurogiramu tenzi, Doctor of Medicine (MD), Doctor pakati Pharmacy (Pharm.D), chirongwa Ph.D, uye Dhokotera Business Administration (DBA) mhiri zvakawanda nokuranga, kusanganisira bhizimisi, dzezvoupfumi, dzidzo, ouinjiniya, chikafu uye kurima, nevanhu, sayenzi evanhu, iT, mutemo, mushonga uye utano sayenzi, sayenzi zvepanyama. Vakawanda vedu zvirongwa dhigirii nevamwe kuna UAEU, uye vazhinji vavo inopiwa nemamwe mubatanidzwa. Chero zvaunoda, matarenda, uye zvinangwa, UAEU ane chirongwa anoenderana.
College of Food & kurima
Unoda kurukura United Arab Emirates University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
United Arab Emirates University iri Map
Photos: United Arab Emirates University pamutemo Facebook
United Arab Emirates University wongororo
Join kukurukura pamusoro United Arab Emirates University.